Akụkọ - CIBE nke 56th China (Guangzhou) International Mma Expo 2021
CIBE nke 56th China (Guangzhou) International Mma Expo 2021
Eningbọchị emepe: 2021-03-10
Datebọchị Ọgwụgwụ: 2021-03-12
Ebe: Pazhou Hall, Ihe ngosi Canton
Haziri site na Shenzhen Jiamei Exhibition Co., Ltd., CIBE 2021, 56th China (Guangzhou) International Beauty Expo, ga-enwe na Pazhou Pavilion nke Canton Fair site na Machị 10 ruo 12, 2021. Usoro nke agụmakwụkwọ na azụmaahịa ọrụ ebube. a ga-enwekwa nzukọ ndị dị elu n'oge Guangzhou International Beauty Expo 2021, na-ekpuchi azụmahịa azụmahịa, mkpọsa, nkpuchi ihu, nnukwu mma ahụike, egbugbu, nlekọta ntutu, ntu na isiokwu ndị ọzọ, nke bụ usoro kachasị mma maka ndị ọkachamara ụlọ ọrụ iji ghọta otu - ịkwụsị atụmatụ ịzụta. Nabata na Guangzhou International Mma Expo!
Ọkachamara mara mma, ahụike, bulie ntutu, ntu, ntutu anya mara mma, akara aka, yana nnukwu ụlọ ọrụ ahụike mara mma mbipụta ụlọ ọrụ dịka ngosi, yana iji gbasaa mpaghara mpaghara ịchọ mma na ọnụ ọgụgụ nke ndị gosipụtara, nnukwu mpaghara ịchọ mma gụnyere azụmaahịa eletrik, ọkụ eletrik, ókèala, gụnyere ụdị mbubata mbubata mba ụwa, ihe ịchọ mma, senti, ihe ịchọ mma mara mma, nlekọta onwe onye, ​​sachaa ngwaahịa, ọkọnọ nke akụrụngwa, akụrụngwa, wdg.
Ihe ngosi ịmebata
Tọrọ ntọala na 1989, China International Beauty Expo enweela nke ọma maka afọ 50. Ọ bụ ụlọ ngosi mara mma na ihe ịchọ mma nke mbubata na mbupụ mbupụ na ogologo akụkọ ihe mere eme na China, nke kwalitere ụlọ ọrụ mara mma na ihe ịchọ mma na China maka afọ 29. Dị ka ụlọ ọrụ ntanetị nke ndị China guzobere na ya, a na-akpọ Mma Mma dị ka ogwe nke ụdị mba ndị China. Nyere ọtụtụ ụdị mba aka site na obere ruo na nnukwu, iji merie asọmpi mba ụwa, uru iji merie. Site na 2016, a ga-enwe ya ugboro atọ n'afọ, na Machị na Septemba na Guangzhou China Import na Export Fair Pavilion, yana Mee na Shanghai National Convention and Exhibition Center (Hongqiao). Kwa afọ ngosi ebe bụ ihe karịrị 760,000 square mita, aghọwo a zuru ụwa ọnụ ọkachamara ngosi, kwa ụbọchị chemical akara, ọkachamara akara, ọkọnọ akara, dum ụlọ ọrụ yinye mkpuchite. Ngosipụta a dọtara ụlọ ọrụ sitere na ọtụtụ mpaghara China, Asia, Europe, America, Oceania na mba na mpaghara ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ akwụkwọ ọzụzụ ndị ọkachamara mara mma, ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọkachamara na ụlọ ọrụ azụmahịa, ndị mkpakọrịta ga-abịakwa ikwusa ozi ọma, China International Beauty Fair aghọwo ihe ngosi kachasị mma nke mgbanwe nke ụlọ ọrụ mara mma nke China.
China International Beauty Fair na-achịkọta ngwaahịa na ndị ama ama, na-eme ka ọ bụrụ ikpo okwu kachasị mma maka ndị ọrụ nọ n'ụlọ ọrụ iji chọpụta atụmatụ ịzụta otu nkwụsị. Na mgbakwunye, n'oge ngosi a nwere usoro nke agụmakwụkwọ na nke azụmahịa na BBS dị elu, na-ekpuchi azụmaahịa webụ, mkpọsa, nkpuchi, mma ahụike, egbugbu, bulie ntutu, ntu, dị ka ọtụtụ isiokwu, ndị ọkachamara akpọrọ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ma na-ekere òkè na ụlọ ọrụ ahụ ịkọrọ * * * sayensị na teknụzụ ọhụrụ, ahịa na omume na-ewu ewu, na-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka inweta ohere azụmaahịa ma ghọta usoro ahịa.